DEGEG: Qarax Qasaare uu ka dhashay oo ka dhacay Magaalada Garbaharay ee Xarunta Gobolka Gedo. – Gedo Times
DEGEG: Qarax Qasaare uu ka dhashay oo ka dhacay Magaalada Garbaharay ee Xarunta Gobolka Gedo.
1st October 2016 admin Wararka Maanta 0
Qarax qasaare geystay,ayaa.gordhaweyd kadhacay magaalada Garbaharay ee Xarunta.Gobolka Gedo, Qaraxa oo ahaa miino lagu aasay xarun,ganacsi,oo,Degmadaasi ku,taala, iyadoo at qaraxani ku dhaawacmeen afar qofood oo rayid ah.
Dhaawacyada ayaa ah kuwo sahlan oo lagula tacaalay Isbitaalka Degmadaasi Garbaharay ee Xarun Goboleedka Gedo, Garbaharay ayaa kamid.ah Magaalooyinka ay amaankooda suganyihiin ee Soomaaliya, inkastoo mararka qaar falalka qaraxyada ay kadhacaan.
Gudoomiyaha Degmada Garbaharay ee Gobolka.Gedo Nuur Sheekh Maxamed buraale ayaa warfidiyeenada u sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyeen Kooxda Alshabaab, balse majirto wax sheegasho ah oo dhinaca shabaabka wali kayimid.
Qarax geestey qasaro oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Ganacsade Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay South Afrika